Avylavitra – Malag@sy Miray
Rehefa miresaka fandaniana ihany isika dia tsy afa-mivaona amin'ny resaka tsena. Tsy ny tsena rehetra koa anefa no hahaliana fa tsena iray miavaka sy mandalo fotsiny ihany. Dia ny Bazar de Noel....BAZAR DE NOEL, milay fa tohizo eeee! Isan'andro no fetin'ny mpivarotra
Avylavitra	Aucun commentaire
Misandratr’andron’ny Alatsinainy, amin’iny tohotohobaton’Antaninarenina iny. Miresaka ireto roalahy (avy any amin’ny banky angamba) ary mitaraina ny iray fa toa tsy nisy vola ‘positionné’ tany amin’izay nalehany tany. Tsy hariny ny tsy hanontany ilay namany ny amin’izay tokony hataony. Teo no nahalalako fa hay miaramila ireto roalahy ireto, satria hoy indrindra ilay mpanontany: Fa ahoana ihany ary letsy no tsy mbola tonga ny vola a?. Tena hangataka hiala ao amin’ny R.T.S lesy aho dia hifindra any amin’ny CAPSAT Namaly azy ilay namany, toa tsy nanampo akory ilay resak »itsy voalohany Fa ahoana leity? Tsotra no navalin’ilay iray azy Ka any anie hono no be vola izao e Dia lasa ny saiko, indrindra…
Androany vao tena nihatra ilay fandrarana fihetsiketsehana politika navoaky ny HAT. Vao maraina dia efa feno mpitandro filaminana ary tsy azo nidirana ny kianjan’Ambohijatovo. Nivorivory teny amin’ny manodidina teny aloha ny mpomba an-dRavalomanana. Nahitana azy ireo hatrany Ankazotokana sy Ambanidia ary Antsahabe. Eny fa hatrany Anosy sy Anosibe ary ny manodidina azy akaiky. Rahampitso moa dia toerana telo samihafa indray no notondroin’ireo mpitarika fa hiaingan’ny hetsika, ka tafiditra amin’izany ny tetezan’Andravoahangy. Nafana androany. Nirefotra ny basy. Nisy ny naratra. Tsy mbola fantatra hatreto na nisy maty na tsia.Fa ny hita aloha dia nisy ny ankizy efatra voan’ny bala tsy nahy teny Isotry (raha notrotroin-dreniny teny ampiantsenana), ny tongotr’ilay zaza no…
Nidina tany Mahajanga izahay taminsquowhawydny faransquowhawydny herinandro lasa (Paka) teo mba hanangona vaovao momba ny fianakaviansquowhawydi Kamba, sy hamita ny adidy tsy vita ihany koa fony mbola nahateo am-bohitra ny razana. Nisy ny sary nentina avy any, toy ny sarinsquowhawydi Kamba (miisa 3) talohansquowhawydny famonosana azy (Nalaina tany aminsquowhawydny namansquowhawydi Diana Chamia), ary ireo sary nalaiko manokana tany an-tokantranonsquowhawydny reniny, ka ahitantsika ansquowhawydi Viviane (ilay kambana taminsquowhawydi Kamba) sy ny reniny ary ireo mianadahy iray tampo aminy mbola velona, dia i Said sy Berthine. Raha zaza mbola tsy nahay afa-tsy ny mikisakisaka amin’ny tany no nanateranay an’izy telo mianaka teny amin’ny taxi brousse fahiny, dia zazavavy kely pelipelika sy mihazakazaka…
12h 38: Raha saika hisy ny diabe androany, dia naharay taratasy fiantsoana avy amin’ny anarany, nalefan’ny FFKM, ho fampihaonana azy amin’-dRAVALOMANANA Marc, amina toerana tsy an’ny atsy na ny aroa. Androany amin’ny 1 ora (13h) izay fihaonana izay, ary dia nofoanana aloha izao tamin’ny 12 ora 38 minitra izao ny diabe saiky hatao. Miandry izay tohiny indray izany. Re siosio koa fa hoe efa any Tsiafahy i RANJIVASON Jean Theodore. Ary iereo reserviste voasambotra nandritra ny tifitifitra tetsty Anosy kosa dia nalefa any Manjakandriana (voalaza fa misy eo amin’ny 39 olona eo izy ireo). Ary talohan’ny nahatongavany teo ankianja androany dia nisy saika hitoraka tamin’ny cocktail molotov ny fiara nitondra…
Avy tsy mitsahatra ny erika ao an-tokontany ao izao hariva izao. Sady mangatsiaka be ny andro. Manoatra noho ireny andro ririnina ireny. Angamba koa efa zatra ilay hafanana nigaingaina nandritry ny andro vitsivitsy teo aloha teo ny tena. Efa nalefa ihany moa ny hafatra fa hoe misy andro ratsy miforona any akaikin’ny morontsioraka any amin’izao fotoana (raha tsy efa mandrakotra an’i Madagasikara aza). Ka tany amin’ny faritra Analanjirofo tany izy izay, ary mitondra orana betsaka. Enga anie mba ho hatreo fotsiny ihany ny amin’iny. Izany rehetra izany dia nanaitra fahatsiarovana tao anatiko. Herintaona lasa tokoa mantsy izay. 20 febroary toy izao anio izao, ny taona 2008, no namoahako teto amin’ny…
Maro tamintsika mpikirakira aterineto no mahalala (na nahalala) ny tantaran’i Kamba, ilay zaza kambana nilàna fandidiana natao teny amin’ny HJRA Ampefiloha). Tsy vitsy koa no nahafantatra (ireo izay nanaraka hatrany am-boalohany ny tantara) fa tsy nankasitraka loatra ny hanaovana opération an’iny zanany iny ny reniny, noho, ny tahotra sy ny maro tsy tanisaina. Resin’ny sasany tamintsika lahatra ihany anefa ilay reny mahantra ka nanaiky ny handraisana an-tànana an-janany (rehefa nomena izao karazan-toky rehetra azo naroso izao. Izaho aloha tsy anisan’izay nampanatena volana an!) Roso ny dia ka nandeha niakatra an’Iarivo ilay ankohonana kely. Be ireo nanohana tamin’ny fanaovana izay hahatontosa ilay fandidiana. Vita soa aman-tsara izany. Be amintsika koa no…